गल्ती नै गल्तीयुक्त सलमानको सुल्तान (यस्ता छन् पाँच गल्ती) - Himalayan Kangaroo
गल्ती नै गल्तीयुक्त सलमानको सुल्तान (यस्ता छन् पाँच गल्ती)
Posted by Himalayan Kangaroo | २५ असार २०७३, शनिबार ०६:१९ |
काठमाडौं । सलमान खानको फिल्म ‘सुल्तान’ ले यतिखेर पुराना रेकर्ड ब्रेक गर्दै व्यापार गरिरहेको छ । पहिलो दिनमा नै ४० करोडको व्यापार गरेर यसले नयाँ रेकर्ड समेत बनाइको छ ।
फिल्म विश्लेषकहरुका अनुसार यसले अरु दिनहरुमा पनि बम्पर व्यापार गरिरहेको छ । नेपालमा पनि सुल्तानले निकै राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । सलमान खान र अनुष्का शर्माको धमाकेदार अभिनयले सुल्तानलाई हरेक कोणबाट बलियो बनाएको फिल्म समीक्षकहरुको भनाइ छ ।
तर सुल्तान कुनै गल्ती नै नभएको फिल्ममा भने होइन । किनभने यसमा पनि केही यस्ता गल्तीहरु भएका छन्,जुन कुराको पछि मनन भएको छ ।
सुल्तान फिल्ममा भएका पाँचवटा गल्तीहरु
१.बच्चाहरुलाई बिचबाटोमा छोडिदिन्छन्
फिल्ममा सलमान खान अफिसका लागि निस्किनछन् । उनले बिचबाटोबाट स्कुल हिडेका केटाकेटीलाई लिफ्ट दिन्छन् । तर जुस खाने ठाउँ ति केटाकेटीलाई त्यही छोडेर सलमान खान अफिस लाग्छन् । उनीहरुलाई सलमान खानले स्कुलसम्म छोड्नु पथ्र्यो ।
२. इरानको सर्टफर्ममा गल्ती
फिल्ममा सलमान खान इरानका रेसलरसँग लड्छन् । तर स्कोर बोर्डमा भने इरानको सर्टफर्ममा भने गल्ती देखाइएको छ । खेल भइरहेको अवस्थामा इरानको सर्टफर्ममा आइ आर आइ हुनुपर्ने थियो तर स्कोर बोर्डमा आइ आर ए लेखिएको छ ।
३. जब अनुष्का हतियार लिएर अखाडामा उत्रिइन्
कुनै पनि खेलको खेल मैदानमा कुनै खाले सामान लान पाइदैन । कुश्तीमा पनि यो नियम लागु हुन्छ । तर अनष्काले यो नियम तोडिदिएकी छिन् । उनले आफ्नो कपालमा पिन लगाएर मैदानमा उत्रिएकी छिन् ।
४.सलमान खानको सालिक सलमान जस्तो छैन
फिल्ममा सलमान खानले पाएको सफलतालाई लिएर सालिक बनाइन्छ । गाउँलेहरुले गरेको यो कामलाई सबैले सराउँछन् तर जब सलमान खानको जस्तो सालिक भने देखिएको छैन । यत्रो हाइ बजेटको फिल्ममा यती सानो गल्ती हुनु राम्रो मानिदैन ।
५. फिल्ममा सलमान खान कुश्ती खेल्नेभन्दा पनि सुपरम्यानको छनक देखाएका छन् ।
फिल्ममा यस्तो एउटा सिन रहेको छ जहाँ गाउँलेहरुले फसेको ट्याक्टर निकाल्न सलमान खानको भर पर्छन् । उनीहरु सबैले सलमान खानले निकाल्छ भन्दै हेरेर बस्छन् । दलदलमा फसेको ट्याकटर निकाल्ने काम त कि सुपरम्यानले गर्छ कि शक्तिम्यानले । कुश्ती खेल्ने खेलाडीले सहयोग मात्र गर्न सक्छ ।
Previousविनियोजन विधेयक आज पारित हुँने
Next१० वर्षपछि खुल्यो जिदानले माटेराजीलाई टाउकोले हान्नुको कारण
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार १३:२०
छवि ओझाका छोरालाई साम्राज्ञी मनपरेपछि…
२५ माघ २०७३, मंगलवार १३:५१
गेम अफ थ्रोन्स’ र ‘नागिन’ उस्तै हुन् : एकता कपुर
१९ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०९:२९